Fanamarihana | BAODING YINGTESHENG BRISTLE SY BRUSH MAKING CO., LTD
Tamin'ny 2005, ny fampidirana ny haitao sy ny milina dia namela ny YTS hanitatra ny orinasany handoko ny faritra borosy. Tamin'io taona io ihany dia nanangana ny foibeny ny YTS - mpanamboatra ao amin'ny Qingyuan Industrial Park, faritra ambanivohitra Baoding, Hebei. Izy io dia mitazona 700,000 toradroa toradroa, noforonin'ny zavamaniry mpanao zaridaina nandrahoina, zavamaniry fanaovana sarina filamentana, sampana fanaovana birao, sampana fanaovana borosy.
Manana mpiasa maherin'ny 300 ny YTS, ao anatin'izany ny mpamorona matihanina, injeniera. Manana ny fahaiza-mivoatra ny faritra sy vokatra vaovao izahay hanomezana ny mpanjifa ny vokatra tsara indrindra. Manana serivisy haingana sy serivisy aorian'ny varotra koa izahay hanatsarana ny fifaninanana. Manompo ny mpanjifantsika amin'ny fomba tsy miova sy ara-potoana izahay. Ny tena tanjon'ny YTS dia ny hampiroborobo hatrany ireo vokatra vaovao, hanatsara ny kalitao, hampihena ny vidiny ary hanolotra ny vokatra tsara indrindra ho an'ny mpanjifa miaraka amin'ny vidiny mifaninana indrindra.
Fa maninona no misafidy YTS ?!
Nandritra ny telopolo taona, ny "kalitao ambonin'ny zava-drehetra" dia nampiofanina foana tao an-tsain'ny mpiasa. Ny borosinay tsara kalitao dia raisina an-tanan-droa avy amin'ny mpanjifa manerantany.
Ny YTS dia manana mpiasa maherin'ny 300 miaraka amin'ny famokarana baoritra 20.000 ary 30 tapitrisa borosy isan-taona. Betsaka amin'ireo mpanao biriky an'ny YTS no manana traikefa mihoatra ny roapolo taona, maka ny akora tsara indrindra ary mamadika azy ireo ho borosy tsara indrindra misy.